‘नेपालमा हुने वैदेशिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य’ | नेपाल इटाली डट कम
‘नेपालमा हुने वैदेशिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य’
September 12, 2010 — nepalitaly
चिनियाँ उच्च अधिकारी नेपाल भ्रमणमा
चिनियाँ राष्ट्रपति हुलाई कांग्रेसको निम्तो
प्रचण्डलाई चीन भ्रमणको निम्तो
छिमेकी चीनले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डतामा हुने कुनै पनि वैदेशिक हस्तक्षेप आफूलाई मान्य नहुने बताएको छ । नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हे योङले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत वरिष्ठ नेताहरूसँगको भेटमा त्यस्तो बताएका हुन् ।
हेले नेतृत्व गरेको २१ सदस्यीय टोली शनिबार ५ दिने भ्रमणमा नेपाल आएको हो । ‘नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताप्रति हामी संवेदनशील छौँ,’ सचिवालय सदस्य हे योङको धारणा उल्लेख गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष नाराणकाजी श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा हुने वैदेशिक हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन ।’
भेटमा वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरालगायत वरिष्ठ नेताहरू सहभागी थिए । नेपालको राजनीतिक परिस्थितिबारे चीनले विशेष चासो लिँदै आएको छ ।
हे चिनियाँ प्रशासनअनुसार उपप्रधानमन्त्री तहका उच्च अधिकारी हुन् । नेपाली राजनीतिमा भारतीय बढ्दो प्रभाव रहेकै वेला चीनको यस्तो धारणा आएको हो । ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीन हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन र अन्य मुलुकले हस्तक्षेप गरेको पनि उचित ठान्दैन,’ हेको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भने ।
भेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा जारी राजनीतिक अस्थिरता, सातपटकसम्म असफल भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचन, दलहरूबीचको बढ्दो वैमनस्यता, संविधान निर्माण, सेना समायोजनबारे हेलाई जानकारी गराएका थिए । भेटमा हेले माओवादी संविधानसभाको ठूलो दल भएकाले बढी जिम्मेवार र रचनात्मक भूमिका खेल्न माओवादी नेताहरूलाई सुझाब दिएका थिए ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेपालमा राजनीतिक परिस्थितिलाई सहज रूपमा लैजाने पक्षमा आफूहरू भए पनि थुप्रै चुनौती रहेको बताएका थिए । ‘पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे अध्यक्षले विस्तृत जानकारी गराउनुभयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा छिटो संविधान निर्माण होस्, दिगो शान्ति कायम होस्, समृद्धि होस् तथा राजनीतिक गतिरोध अन्त होस् भन्ने चाहना चिनियाँ पक्षले राख्यो ।’
उनका अनुसार नेपाल-चीन सम्बन्ध अझै नयाँ उचाइमा लैजान चाहेको पनि हेले बताएका थिए । ‘नेपाल-चीन र माओवादी-चीन सम्बन्धलाई अझै नयाँ उचाइमा लैजान हामी चाहन्छौँ,’ सचिवालय सदस्य हेले भनेका थिए । हेले माओवादी अध्यक्षलाई उपयुक्त समयमा चीन भ्रमण गर्नसमेत निमन्त्रणा दिएका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगका रूपमा लिएको भन्दै चीनको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता र एक चीन नीतिबारे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको श्रेष्ठले उल्लेख गरे । केही समयअघि माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र चिनियाँ अधिकारीबीच ५० करोडको आर्थिक सहयोग चीनले दिनेबारे कुराकानी भएको भनिएको टेप-प्रकरणबारे भने कुनै चर्चा नभएको महराले दाबी गरे । ‘त्यसबारेमा कुराकानी गनर्ैै आवश्यक थिएन,’ महराले भने, ‘टेप-प्रकरणबारे उच्चारणसम्म गरिएन ।’ महराका अनुसार सद्भावना भ्रमणका क्रममा टोली नेपाल आएको हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेषदूत श्याम शरणपछि नेपाल आउने विदेशी उच्च अधिकारी नै हे हुन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन सातौंपटकसम्म असफल भएका वेला चिनियाँ उच्च अधिकारीको भ्रमणलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ । गत वर्ष पनि चीनका तर्फबाट साना-ठूला गरी १८ टोली नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । प्रमुख राजनीतिक दलहरू माओवादी, कांग्रेस र एमालेको निमन्त्रणामा सो टोली नेपाल आएको हो ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टिका केन्द्रीय सचिवालयका सचिवसमेत रहेका हेले शनिबार नै कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालासँग भेटेका छन् । ‘नेपालमा शान्ति, स्थिरता र राजनीतिक, आर्थिक अवस्था सबल भएको हेर्न चाहेका हेले बताए,’ भेटपछि कोइरालाले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘यहाँको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे चासो व्यक्त गरे ।’
कोइरालाले पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका बारेमा पनि हेले चासो व्यक्त गरेको बताए । ‘महाधिवेशनमा नेपाल आउन चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओलाई निमन्त्रणापत्र पठाएका छौँ,’ कोइरालाले भने । प्रचण्ड र कोइरालासँगको भेटमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छिउ गुहोङ सहभागी थिए ।
दुुवै नेतासँगको भेटमा हेले चीनविरोधी गतिविधि बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । शनिबार नेपाल आइपुग्दा एमालेका वरिष्ठ नेता केपी ओली, माओवादीका महरा, कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्न पुगेका थिए । टोलीले आइतबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भेट गर्ने भएको भएको छ ।
« भारतले मधेशी नेतालाई धम्क्याएकाले प्रधान मन्त्री चुनिएन : बिजुक्छे
नेपाली किशोरीमाथि अमेरिकामा शोषण »